Danjiraha Soomaaliya ee QM oo ka warbixiyay xaalada Soomaaliya. – The Voice of Northeastern Kenya
Danjiraha Soomaaliya ee QM oo ka warbixiyay xaalada Soomaaliya.
Star FM January 4, 2019
Danjiraha Qaramada Midoobey u fadhiya Dalka Soomaaliya Abuukar Daahir Cusmaan ayaa Golaha Ammaanka ee QM uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya.
wuxuuna ugu horrayntiiba cambaareeyey hoobiyayaashii lala beegsaday Xarunta Qaramada Midoobey ee Muqdisho, isagoo sheegay in dowladdu ay waddo baaritaan buuxa si loo ogaado cida falkaasi gaysatay.
Danjiraha ayaa Golaha la wadaagey horumarada ay dowladda Soomaaliya ku tallaabsatay mudaddii uu dalka hogaaminayay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo xusay in dowladda hadda jirta ay si dhaw ula shaqaynayso hay’adaha Qaramada Midoobey maadaama Soomaaliya ay Jimciyada Qaruumaha ka dhexaysa ku biirtey sannadkii 1960-kii xiligaas oo ay madaxbannaanideeda heshay, ayna ixtiraamto qawaaniinta iyo shuruucda u degsan golaha loo dhan yahay.
Danjiraha Soomaaliya ee QM oo ka hadlaya Talaabadii ay dowladdu ku eriday Wakiilkii QM ee Soomaaliya, Nicholas Haysom, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay u kala duwan yihiin ururrada caalamiga ah ee ay xubinta tahay iyo falalka saamaynta leh ee uu qof gaar ah ku kaco.
wuxuuna muujiyey sida dowladda Soomaaliya aynana marnaba raalli uga ahayn falalka ka baxsan habmaamuuska iyo dhaqanka dibloomaasiyadda ee abuuraya jawi sumaysan oo carqalad ku ah horumarka lagu tallaabsaday.
Danjire Abuukar waxa uu sidoo kale xusay in dowladda Soomaaliya ay go’aannadeeda u madaxbannaantahay, ayna hadda dagaal kula jirto argagaxisada, qabyaaladda iyo musuqmaasuqa, sidaasi darteedna ay u baahan tahay in la garab istaago oo aan la dibindaabyeyn.
Danjiraha oo arrinta Mukhtaar Roobow ka hadlaya ayaa sheegay in qof Golaha Ammaanku cunaqabatayn ku soo rogey oo aan dhammaysan barnaamijka dhaqan-celinta ee loogu talagalay xubnaha ka soo goosta kooxaha argagixisada loogu yeero aannu jago ka qaban karin Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale sheegay in labadii doorasho ee Soomaaliya ugu danbeeyey ay Wakiillada QM u qaabbilsan Soomaaliya markasta ku celin jireen in doorashada qof argagaxiso hore ugu lug lahaa ay noqonayso tallaabo dib-u-gurasho ku keenaysa qaranka iyo mabaadi’da caalamiga ah labadaba. Danjiraha ayaa Golaha u sheegay inaanay aqbali doonin dhalleecayn iyo in xubno argagaxiso loogu yeero la difaaco sida uu hadalkiisa ku sheegay.
← Maraykanka oo u digay muwaadiniintiisa u safraya Shiinaha
Agaasimaha dacwad soo oogidda oo doonayo in 22 sano la xiro eedeysane lala xariiriyay daroogada →